SIDA LOO DHIGO DABACASAHA JIILAALKA DHULKA: ILAA GUGA, IYO SIDOO KALE SHURUUDAHA LA XAQIIJIYAY IYO HABABKA LOOGU TALAGALAY QASHIN QUBKA - KHUDRADDA
Karootada waa dalag cagaaran oo caadi ah oo bannaanka uuna sii kordhaya maanta.
Daryeelidda waa mid fudud, laakiin habka kaydinta wuxuu leeyahay sifooyinkiisa, iyadoo ku xiran tayada dabacasaha iyo nooca.
Inkasta oo siyaabo badan oo loo ilaaliyo beergooyska, ikhtiyaarka lagu kaydin karo karootiga lagu aasay dhulka ayaan weli caan ahayn.
Karootada waa dhirta biennial, taas oo awood u leh in ay ahaato heerkul hoose ee gobolka of dormancy ah. Laakiin xaaladaha wanaagsan, kobaca ayaa si degdeg ah u dhaqaajiya. Nasasho khasab ah ayaa loo baahan yahay si loo dhamaystiro geeddi-socodka horumarinta. Guga, ka dib markii qaar ka mid ah wakhtiga kaydinta, sprouts waxaa la aasaasay. Kuwani waa bilawga dhalashada caleemaha mustaqbalka.
Karootada waxaa loo tixgeliyaa dalag. Waxaa loo isticmaali karaa labadaba cusub, iyo kaydinta, wax soo saarka. Wixii kaydinta, koriinka doorbiday noocyo goor dambe ee karootada. Intaa waxaa dheer, waxaad ku kaydin kartaa oo kaliya xididada kuwaas oo buuxin kara shuruudaha soo socda:
foomka saxda ah;
Waa muhiim! Si aan lumin qayb ka mid ah beergooyska inta lagu jiro kaydinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkul ah 0-1 digrii, iyo qoyaan ah 95-100% (faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka heerkulka ee kaydinta dabacasaha, halkan fiiri).
Miyuu suurtogal yahay in la badbaadiyo dalagga dalagga ee dhulka?
Habkani waxaa badanaa doortaa kuwa bannaanka u ah kuwa aan haysan dhulka hoostiisa. Dhulka, iyada oo diyaarinta saxda ah ee dalagyada xidid iyo habaynta godadka, kaydinta noqon doonaa dheer.
Kaliya noocyo dambe dabacasaha dabacasaha ayaa lagu kaydin karaa dhulka. Kuwa ugu caansan waa noocyada soo socda:
Shantane. Kala duwanaanta noocaan oo kale ah oo leh daryeel ku habboon ayaa siinaya wax-soosaarka sare
dalagyada xididka ah ayaa laga goyn karaa horraantii 140 maalmood laga bilaabo xilliga abuurka caleemaha;
Miraha waa qaab dhismeed ah, dhererkoodu waa 16 cm;
dushiisu waa mid si siman oo siman, dhamaadkana waa yar yaryar;
Tilmaamaha kala duwan ee noocyada kala duwan ee ay tahay in midhihiisa uusan kudheeri Karin.
Royal Shantane. Tani waa kala duwanaansho heer sare ah, taas oo loo aqoonsan yahay inay tahay midka ugu wanaagsan ee noocyada dambe ee dabacasaha.
goosashada waxay dhacdaa maalinta 110aad ee ka dib biqilka;
miraha waxay leeyihiin midab guduudan, shinni-qaabeeya;
waxay u kala duwan yihiin soodhada cas, macaan iyo dabacsan;
dalagyada xididka ah waa in la koro carrada dabacsan iyo waraabin dhexdhexaad ah;
ku haboon tahay kaydinta dhulka oo leh hawo fiican iyo qoyaan yar.
Qabashada Tani waa kala duwanaansho cusub oo cusub oo ah taranta taranka.
oo lagu garto dhalidda sare;
waad goosan kartaa, laakiin 125 maalmood ka dib biqilka;
khudaarta cagaaran, dhererkeeda 21 cm;
qaabka cylindrical, nadiifinta qashinka oo aan cidhiidhi lahayn;
waxaa lagu keydin karaa 4 bilood oo qoyaan la aqbali karo;
noocyada kala duwan maaha mid furfuran marka la eego beerashada;
wuu kobcin karaa dhul kasta oo uu ku dhaco abaar dhexdhexaad ah.
Sirkana F1. Tani waa noocyo kala duwan oo isku dhafan oo aan horay loo arag.
waxaa lagu kala saaraa dhalidda sare iyo tayada wanaagsan ee jiifka ah;
Bisaylka miro wuxuu dhacaa maalinta 135 kadib biqilka;
miro orange, dherer 20 cm;
dhammaadka kala duwan ee dhammaadka, waxay leedahay qaab cylindrical ah;
Waxaad ku kori kartaa dhul kasta oo leh waraabin dhexdhexaad ah.
Si loo dhigo kaydinta godadka dhulka, khudradda ayaa loo baahan yahay iyada oo aan wax dhaawac ah, calaamadaha waxyeellada iyo isdhaafka caadiga ah sida caadiga ah khudaarta ama khudradda xididdada. Haddii goosashada kaydinta ee dabacasaha si fiican loo keydiyo dhulka, ka dibna waxay awoodi doontaa inay ilaaliso dhadhanka iyo muuqaalka ilaa guga.
Goobta la xushay waa inay u hoggaansamaan heerarka soo socda:
waa in aanay jirin cuduro ciid ah oo kala duwan beerta;
Goobta guga waa in aan la dhalaalin biyo kulul;
Qorshaha leh dalagga bidix waa inaysan faragelinin shaqada guga beerta.
Sida loo ilaaliyo khudaarta illaa guga
Habkani wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda:
Bishii ugu danbeysay ee dillaacsanaa dushooda waa inaysan biyuhu beerin.
Si aad u goosatid, dooro maalin ka hor inta aaney roob lahayn (iyadoo la door bidayo, waa inaysan jirin roobab inta lagu jiro todobaadka). Ka dibna ciidda kuma ururin qoyaan xad dhaaf ah.
Horay u dillaacday dushooda dabacasaha, heerkulku waa inuu u dhigmaa meesha laga jarayo.
Si aad u buuxiso sariir sanduuq jajab weyn. Lakabka waa in uusan aheyn mid dhumucsan, 2-5 cm waa ku filan tahay, isla mar ahaantaana, iska hubi in ay si buuxda u dabooleyso maaha kaliya aagga dalagyada xididka, laakiin sidoo kale aagga ku wareegsan (1 m sariirta). Sababtoo ah ogsijiinka qaxoontiga ayaa u soconaya dusha dhulka.
Ku dabool faashadda. Tan waxaa la samayn karaa isla markiiba ka hor bilowga bilowga.
Lakabka xiga wuxuu dhigaa walxaha la hagaajiyay. Kuwani waxay noqon karaan caleemo geed, peat, sida balka.
Ku dabool daboolka kudheerta leh polietilenka ama dusha sare. Waad ku mahadsan tahay, barkin kulayl ayaa la abuuray, kaas oo u oggolaanaya in uu sii hayo dalagga, oo laga aasay qabow, xilliga jiilaalka. Qalabka qarxa ama filimka si taxadar leh u hagaajin wixii alaab ah.
Baraf dheeraad ah ayaa abuuri doona ilaalin kaabis ah cimilada qaboobta, ka dib marka dhalaalinta oo xididdadu ay noqon doonto xaalad qumman. Fiiro gaar ah u ilaalinta karootada ka soo jiirka. Xayawaankani ma seegi doonaan fursad ay ku cunaan khudradda delicious jiilaalka. Ilaalinta, waa lagama maarmaan in la isticmaalo laanta dabka ee rinjiga. Waa ku filan inaad ku kala firdhiso dusha sare ee lakabka diiran.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo ilaaliyo dabacasaha beerta ilaa guga, waxaad ka heli kartaa halkan.
Daawo fiidiyo ku saabsan sida loo keydiyo karootiga midigta beerta.
Habkani wuxuu ku lugleeyaa kaydinta goosashada xayawaan habaysan oo lagu qoday goobta.
Caawimaad! Waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo maaha oo kaliya tiknoolajiyada abaabulidda goobta kaydinta, laakiin sidoo kale saarista dalagyada xididada dhulka iyo diyaarinta u dhigista.
Dhammaan sharciyadani waa kuwo gebi ahaanba fudud, inta ay ku caawinayaan inay ilaaliyaan beergooyska waqti dheer oo leh tilmaam tayo fiican leh. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad qabato hawlo taxadar leh oo taxane ah:
Ka hor inta aan laga saarin dalagyada xididada dhulka laga soo saaro waa in aan la waraabin.
Wixii qashin ah ee roodhiga isticmaala.
Ha dhulka ku dhajin khudradda, ha ku garaacin calaamadaha. Saamaynta farsamooyinka noocan oo kale ah waxay keenaysaa samaynta microtraumas, taas oo ka sii dari doonta badbaadada dalagyada xididka ah waxayna horseedi karaan duufaan hore.
Karootada la uruuriyey ayaa ku faafay qalalan.
Ka dib qalajinta, ka saar ciidda xad-dhaafka ah.
Dalagyada beeraha. Iska yaree dhinaca sare ee xididka. Heerka cagaarka haray waa inaanu ka badnaan 2-3 cm.
Kala sooc dalagga.
Hadda waxaad sii wadi kartaa xulashada khudaarta si aad u geliso dalool. Wixii nuqulkan dhexdhexaad ah oo ku habboon. Tallaabada xigta waa in la diyaariyo meel loo qoondeeyo. Dooro meel aad u baahan tahay, taas oo aan ku dhicin fatahaad biyo leh baradho guga. Marka xididdada la doorto, waxaad tagi kartaa tabarka si aad u kaydiso.
Waa muhiim! Intaa waxaa dheer, ku rakib dhuunta iyo dabinka oo sunta la dhigo. Tani waxay ka ilaalin doontaa khudradda cayayaanka.
Xoq god god. Meelaha ay ka mid yihiin meelaha ay ka mid yihiin kuleyliyadu waa mid khafiif ah mana jiro qulqulo qoto dheer oo ka mid ah ciidda waa in aysan ka badneyn 30-35 cm. Goobahaas oo ay ka mid yihiin koofiyadaha duurka, qoto dheer ee godadka waa in aysan ka yarayn 50-60 cm.
Sanduuq adag ku rid qoryaha hoose. Dhumucda lakabka waa 2-5 cm. Sand waxay ka hortagtaa xiriirka dhulka iyo bixinta sahayda hawada.
Ku dhaji lakabka khudaarta cagaaran. Ku dabool sanduuqa ilaa 10-15 cm ayaa looga tegayaa geeska godka.
Buuxi dhulka si ay lakabka sare ugu sarreyso geeska ceelka by 8-10 cm. Haddii jiilaalka waa adag, ka dibna lakabka dhulka sare waxaa laga yaabaa in ay noqon 50 cm qaro weyn.
Hadda waxaad tagi kartaa cimilada. Ujeedooyinkaas, isticmaal caleemaha geedaha, peat, balka, laanta dabka.
Haddii aad qorsheyneyso inaad ku kaydiso dabacasaha xilliga jiilaalka Maqsin ama guriga, markaa waxaa jira siyaabo badan oo aad u fiican oo loo ilaaliyo asalka:
Sida loo dhigo dabacasaha guriga haddii aanay jirin maqnaansho
Talooyin ku saabsan kaydinta karootada qaboojiyaha.
Xagee baan ku keydin karootada guriga?
Sida loo keydiyo karootada balakoonka?
Miyuu suurtogal ah in la qaboojiyo dabacasaha digaaga xilliga jiilaalka?
Kaydinta dabacasaha dhulka waa hab wax ku ool ah oo lagu ilaaliyo khudradda cagaaran iyo codka illaa guga xiga, ujeeddooyinkan waxaad ku dhejin kartaa karootada si toos ah beerta ama u diyaari god. Marka la eego hirgelinta, habkani waa mid sahlan mana qaadanayo waqti badan., inkastoo ay u baahan tahay in la raaco dhammaan qodobbada. Habka loo kaydiyo xididdo waa isku mid.